We.com.mm - ကွန်ပျုတာနဲ့အမြဲ သုံးနေရတဲ့သူတွေ လိုက်နာသင့်တဲ့မျက်စိကျန်းမာရေး…။
အလုပ်ခွင်ထဲမှာ အချိန်ပြည့်နီးပါ ကွန်ပျူတာနဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူတွေအတွက် မျက်စိအားနည်းတာတွေတော့ အနည်းနဲ့အများဖြစ်ကြမှာပါပဲ…။ အလုပ်ခွင်ထဲမှာ ကွန်ပျူတာတွေကြည့်ပြီး အလုပ်တွေလုပ်၊ အိမ်ရောက်တော့လည်း ကောင်းကောင်းနားမနေပဲ ဖုန်းနဲ့ ဖေ့ဘုတ်သုံးတာတွေ လုပ်တာတွေကြောင့် အိပ်တဲ့အခါမှပဲ မျက်လုံးကိုအနားပေးနေတာမျိုးဖြစ်တာကြောင့် မျက်စိကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတာကြောင့် မျက်ကွင်းညိုတာတွေ၊ မျက်လုံးဝေဝါးတာတွေကို ဖြစ်စေတာကြောင့် ကုသနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုလည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…။
၁. ကော်ဖီနဲ့ မျက်လုံးကိုပေါင်းတင်မယ်…။
ကော်ဖီနဲ့မျက်လုံးကိုပေါင်းတင်တယ်ဆိုတာက မျက်လုံးအောက်မှာဖြစ်နေတဲ့ မျက်ကွင်းညိုတာတွေကို သက်သာစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။ ကော်ဖီအမှုန့်ကို အုန်းဆီ၊ ရေတွေနဲ့ရောစပ်ပြီး အနှစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ မျက်ကွင်အောက်မှာလိမ်းပေးပြီး ၁၅ မိနစ်လောက်ထားထားပေးလို့ရပါတယ်…။ ညဘက်အိပ်ခါနီးအချိန်တွေမှာ မျက်လုံးကိုအနားပေးရင်းလုပ်ရင်တော့ ပိုပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိပါတယ်…။ ကော်ဖီကနာကျင်မှုတွေနဲ့ ရောင်ရမ်းမှုတွေကိုလည်း သက်သာစေပြီး မျက်လုံးအောက်မှာရှိနေတဲ့ မျက်ကွင်းညိုတာတွေကိုလည်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်…။
၂. ရေနွေးကြမ်းကို ရေခဲလုပ်ပြီး မျက်လုံးကိုကပ်ပေးပါ…။
ရေနွေးကြမ်းမှာ အလှအပနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်း အများကြီးရှိတဲ့အပြင် အခုတစ်ခါမှာလည်း မျက်လုံးကျန်းမာရေးအတွက်ပါ အသုံးဝင်နေတာကို မြင်တွေ့ရဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။ လက်ဖက်ခြောက်ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့ ရေနွေးကြမ်းကို ရေခဲသေတ္တာထဲမှာထည့်ထားပြီး ရေခဲလေးတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ မျက်လုံးပေါ်မှာဖြည်းဖြည်းချင်း ကပ်ထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။ ရေနွေကြမ်းထဲမှာလည်း ကဖင်းဓာတ်တွေပါဝင်တာကြောင့် မျက်လုံးမှာခံစားနေရတဲ့ ပင်ပန်းနွယ်နယ်တာတွေကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်…။ ဒါကြောင့် ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးအချိန်တွေမှာ ရေနွေးကြမ်းတွေကိုရေခဲထားတဲ့ ရေခဲကိုအဝတ်စလေးနဲ့ထုတ်ပိုးထားပြီး မျက်လုံးပေါ်မှာကပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ မျက်စိပင်ပန်းတာတွေကို သက်သာစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။
၃. သခွားသီးအနှစ်ကို အသုံးပြုမယ်…။
သခွားသီးမှာ ရေဓာတ်တွေလည်းများစွာပါဝင်ပြီး အေးမြတဲ့ဓာတ်တွေလည်းပါဝင်နေတာကြောင့် မျက်လုံးအတွက်အရမ်းကို သင့်တော်ပြီး ပင်ပန်းမှုတွေကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။ သခွားသီးက နူးညံ့တဲ့မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ကို ထိတွေ့ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး…။ သခွားသီးနဲ့ ရှားစောင်းလက်ပတ်အရည်တွေကို အနှစ်ဖြစ်အောင်ရောကြိတ်ပြီး ရလာတဲ့အနှစ်ကို မိတ်ကပ်ဖျက်တဲ့ ဂွမ်းလေးနဲ့တို့ပေးပြီး မျက်လုံးပေါ်မှာ တင်ထားပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အေးမြတဲ့ခံစားချက်ကြောင့် တစ်နေ့တာလုံးပင်ပန်းခဲ့တဲ့ သင့်မျက်လုံးကိုလန်းဆန်းစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။
ကော်ဖီ Face Scrub နဲ့ Facial Mask လေးလုပ်ရအောင်
အပူချိန် ၄၀ ဒီဂရီကျော်တဲ့ နေ့ရက်တွေကို ဘယ်လိုအံတုမလဲ